Imaaraatka oo ciidammo ku wareejiyay Soomaaliya - BBC News Somali
Imaaraatka oo ciidammo ku wareejiyay Soomaaliya
Ciidamada cusub ee UAE soo tababartay
Dowladda Isutagga Imaaraatka Carabta ayaa dowladda Soomaaliya ku wareejisay ciidamo gaaraya 311 askeri oo ay soo tababareen.
Sida lagu qoray wakaaladda wararka dowladda Soomaaliya ee Sonna, safiirka Imaaraatka u fadhiya Soomaaliya, Maxamed Axmed Cusmaan Al Xammadi ayaa ciidamada ku wareejiyay taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya Cabdiweli Jaamac Xuseen (Gorod).
Ciidamadaas ayaa munaasabad loogu qabtay xarunta ciidamada ee Janaraal Gordan, halkaas oo ay ku soo bandhigeen tababarada ay soo qaateen. Ciidamadan ayaa qeyb ka noqon doono dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab.
"Waxaan dadaal xooggan ugu jirnaa sidii ciidammada xooga dalka ay u heli lahaayeen tababaro caalami ah, qalab dhameystiran iyo Mushaar joogta ah si ay argagaxisada Al-Shabaab uga saaraan meelaha ay ku dhuumaaleysanayaa," ayaa lagu yiri war ka soo baxay dowladda.
Madaxweynaha Soomaaliya, Maxamed Cabdullahi Farmaajo ayaa dhowaan si aan qarsooneyn u sheegay in "aysan Al-Shabaab ka adkaan karin ayadoo aan la helin ciidamo tababaran oo qalabkooda u dhameystiran yahay."
Xigashada Sawirka, SONNA
Ciidamadan lagu wareejiyay dowladda Soomaaliya
Wuxuu caalamka ka dalbaday in ay ka caawiyaan dhanka ciidamada iyo dagaalka ay kula jiraan kooxda xiriirka la leh Al-Qacidda ee Al-Shabaab.
Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya, Xasan Cali Kheyre, oo munaasabadda ka hadlay ayaa sheegay in ciidammadan uu u dhameystiran yahay qalabkooda "ayna diyaar u yihiin xureynta dalka".
Dumarka Qatar oo qalinkooda kula dagaalamaya go’doominta
Gawaarida ay ku howlgali doonaan ciidamada cusub
"Qalabka ay haystaan wuxuu isugu jiraa hub iyo gaadiid. Taliyayaasha ciidamada waxaan u sheegayaa in ciidankaas ay ku xirnaandoonto sida aad ula dhaqantaan, natiijada ay dagaalka ka soo hoyaan," ayuu yiri Ra'iisul wasaare Khayre.
Wuxuu dowladda Imaaraatka uga mahadceliyay tababarka ay siisay ciidamadan ka tirsanaan doona xoogga Soomaaliya.
Isbuucii tagay, Madaxweyne Farmaajo wuxuu booqday dalalka Ugandha, Jabuuti iyo Itoobiya, wuxuuna u muuqday in uu raadinayay taageero dheeraad ah oo dhanka ah ururka Al-Shabaab.
Dowladda Soomaaliya ayaa horey u sheegtay in ay u baahan tahay ciidammo si wanaagsan u tababaran oo ka qeybgala sugidda amniga Soomaaliya.
21 Sebtembar 2017
UAE oo mamnuucday in guryaha lagu haysto xaywaanka duur joogta
4 Jannaayo 2017
Dhageyso, Waddamada Khaliijka oo doonaya in Qadar ay wali go'doon ku sii jirto
6 Luulyo 2017
Dhageyso, Xal ma laga gaari doonaa khilaafka waddamada Khaliijka?
4 Luulyo 2017
Trump oo amray in Soomaaliya laga soo saaro ciidamada Mareykanka ka hor xil wareejintiisa
Muxuu macallinkan ku muteystay halka milyan ee doollar?
2 Disembar 2020
Afar arrimood oo la xiriira khilaafka cusub ee Kenya iyo Soomaaliya
30 Nofembar 2020
"Wadaadkii ka istaagay masaajidka wuxuu yiri: 'waa in la gubo dadka qaba AIDS-ka"
1 Disembar 2020
Abiy Axmed: Nabaddoonkii gobolka muxuu dagaal u doorbiday?
27 Nofembar 2020
Debretsion Gebremichael: Ninka magaciisu ku xardhan yahay colaadda Itoobiya
22 Nofembar 2020
Toddobo arrimood oo Soomaaliya ay ku muujisay khilaafka Kenya
Isbarbardhigga awoodda militari ee Soomaaliya, Kenya iyo Itoobiya
26 Sebtembar 2020
Dowladda Faransiiska ma waxay cadaadis cusub saareysaa Muslimiinta dalkaas?
Maxay sheegeen militarigii Itoobiya ee ay TPLF afduubteen?
Nin Mareykan ah oo loo heysto 'xatooyada' lacag badan oo ay Soomaaliya leedahay